Mpanamboatra sy mpamatsy karbôna vita amin'ny simenitra | Mingtaishun
kilasy Votoatin'ny CobaltCo% Grain Size μm Density g / cm3 Mihamafy HRA TRSN / mm2
YG10X Ampiasao betsaka, amin'ny hamafin'ny hafanana tsara. Mety amin'ny fikosoham-bary sy fandavahana vy ankapobeny eo ambanin'ny 45 HRC sy Aluminium, sns amin'ny hafainganam-pandeha ambany. Amporisiho ny fampiasana ity naoty ity mba hanaovana ny fanaingoana, ny famaranana fikosoham-bary, sns.
ZK30UF Mety amin'ny fikosoham-bary sy fandavahana vy ankapobeny eo ambanin'ny HRC 55, vy vy, vy tsy misy fangarony, firaka aliminioma, sns.
GU25UF Suitble ho an'ny fikosoham-bary titanium, vy mihamafy, firaka marefo eo ambanin'ny HRC 62.
Order No. Diameter D Halava ankapobeny L Order No. Diameter D Halava ankapobeny L
Ankehitriny, manome ny mpanjifa matihanina amin'ny vokatra fototra izahay Ary ny orinasanay dia tsy ny "mividy" sy "mivarotra" ihany, fa mifantoka amin'ny bebe kokoa ihany koa. Izahay dia kendrena ho mpamatsy sy mpanohana maharitra anao any Sina. Ankehitriny, manantena izahay fa hiaraka aminao.
Manana ekipa mpivarotra matihanina izahay, voafehin'izy ireo ny teknolojia tsara indrindra sy ny fomba fanamboarana, manana traikefa an-taonany maro amin'ny varotra varotra vahiny, miaraka amin'ireo mpanjifa afaka mifampiresaka tsy mitombina sy mahatakatra tsara ny tena filan'ny mpanjifa, manome mpanjifa serivisy manokana sy vokatra tokana.
Teo aloha: HRC45 Chamfer Mill
Manaraka: Fitotoana karbida